Ventoy: Codsi il furan oo loogu talagalay abuurista darawalada USB -ka ee la kici karo | Laga soo bilaabo Linux
Linux Post Ku Rakib | 04/10/2021 06:00 | Aplicaciones, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Maanta, waxaan sahamin doonaa app la yiraahdo "Ventoy". Codsigan waa mid ka mid ah kuwa badan oo ka jira koonka Codsiyada GNU / Linux, oo shaqadoodu tahay abuurista ama curinta Darawallada USB -ka ee la -kaban karo si loo bilaabo faylasha sawirka disk ka kooban Nidaamyada hawlgalka la rakibi karo ama la rakibi karo.
"Ventoy" Sida kuwa kale oo badan Maareeyayaasha gubida feylasha muuqaalka ISO ee darawalada USB, kuwaas oo diyaar u ah GNU / Linux, si joogto ah ayaa loo cusboonaysiiyaa. Dhawaanna, waxay ku dartay a Isdhexgalka Isticmaalaha Sawirka (GUI) si aad si wanaagsan ugu adeegsato isticmaaleyaashaada.
Kuwa danaynaya inay sahamiyaan qaar ka mid ah kuwayaga qoraallo hore oo la xiriira leh baaxadda Maareeyayaasha gubista faylasha sawirka ISO ee darawallada USB -ka ee la kicin karo, waxaad riixi kartaa xiriiriyeyaasha soo socda, ka dib markaad dhammaysato akhrinta daabacaadan:
"Qoraaga Sawirka Rosa waa codsi yar oo il-qabad leh oo ay abuureen oo qaybiyeen kooxda Ruushka ama urur la yiraahdo RusaLab, oo isna leh GNU / Linux Distro u gaar ah oo loo yaqaan ROSA Desktop. Waa maxay sababta, waxaa si gaar ah loogu talagalay in, marka lagu daro si fudud oo toos ah loogu gubo faylal kala duwan oo ISO ah USB Drive, si loogu sameeyo si hufan oo wax ku ool ah faylasha ISO ee Ruushka Distro.". Qoraha Sawirka ROSA: Maamulaha fudud ee lagu gubayo sawirada ISO USB
1 Ventoy: Abuur USB bootable ah adiga oo koobiyeeya oo dhajinaya faylasha
1.1 Waa maxay Ventoy?
Ventoy: Abuur USB bootable ah adiga oo koobiyeeya oo dhajinaya faylasha
Waa maxay Ventoy?
Sida laga soo xigtay degel rasmi ah de "Ventoy", codsigan waxaa si kooban loogu sharxay sida soo socota:
"Ventoy waa aalad il furan oo loogu talagalay abuurista USB USB bootable ah oo loogu talagalay faylasha ISO / WIM / IMG / VHD (x) / EFI. Iyada oo la adeegsanayo ventoy, uma baahnid inaad qaabeysid diskka marar badan, kaliya waxaad u baahan tahay inaad nuqul ka sameysato faylasha ISO / WIM / IMG / VHD (x) / EFI ee wadista USB -ga oo si toos ah u kiciso".
Oo ku saabsan hawlgalkeeda, waxay ku daraan kuwan soo socda:
Waxaad koobiyeyn kartaa faylal badan hal mar Ventoy wuxuu ku siin doonaa menu boot si aad u doorato. X86 Legacy, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, iyo MIPS64EL UEFI BIOS si isku mid ah ayaa loo taageeray. Waxay kaloo taageertaa inta badan Nidaamyada Hawlgalka ee ugu caansan, sida Windows, WinPE, Linux, ChromeOS, Unix, VMware iyo Xen, iyo kuwo kale oo la yaqaan.
Waxaa ka mid ah muuqaalada ugu fiican de "Ventoy" waxaan xusi karnaa 10 -ka soo socda:
Waa 100% il furan.
Aad bay u fududahay in la isticmaalo oo dhakhso leh marka nuqullada faylasha sawirka lagu duubi karo USB Drive -ka.
Waxay u oggolaaneysaa inay adeegsato aalado kala duwan sida Darawallada USB -ga, Darawalada adag ee caadiga ah ee deegaanka, SSD iyo NVMe, iyo sidoo kale Kaararka SD.
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad si toos ah uga bilowdo ISO / WIM / IMG / VHD (x) / EFI, iyada oo aan loo baahnayn soo saarid.
Uma baahna sii wadista diskka si wax ku ool ah u adeegsiga faylasha ISO / WIM / IMG / VHD (x) / EFI ee la maamulay.
Waxay taageertaa noocyada kala -qaybinta MBR iyo GPT. X86 Legacy BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, qaababka bootinta MIPS64EL UEFI, iyo IA32 / x86_64 UEFI Secure Boot.
Waxay u oggolaaneysaa adeegsiga joogtaynta aaladaha USB.
Waxay taageertaa FAT32, exFAT, NTFS, UDF, XFS, Ext2, Ext3 iyo Ext4 nidaamyada faylka ee qaybta ugu weyn.
Waxay taageertaa faylasha ISO ka weyn 4GB
U isticmaal qaabka menu kabaha asalka ah Legacy iyo UEFI.
Hadda "Ventoy" isagaa iska leh nooca 1.0.53 taariikhaysan 27/09/2021, sida aad ka dhex arki karto qaybta download.
Ka dib markii la soo dejiyo oo la furo faylka u dhigma, kaliya waxay u dhiman tahay in la fuliyo iyada oo loo marayo sahamiyaha faylka, tusaale ahaan, faylka u dhigma istcimaalka garaafka (GUI) ee 32 Bits ama 64 Bits. Iyo shaashadda soo-baxda, kaliya riix batoonka "Ku rakib badhanka" maxaa loogu "Ventoy" lagu rakibo aaladda USB ee daruuriga ah. Haddii aaladda USB la galiyay ka dib markii la bilaabay arjiga, waad riixi kartaa "Cusboonaysii badhanka aaladaha" si loo muujiyo.
Marka la rakibo "Ventoy" ku saabsan Wadada USB, kaliya dhammaan disc files filesama isku mid ah, oo dib u bilaw kombiyuutarka si loo xaqiijiyo bilowga USB -ga iyo akhrinta ISO -ga lagu duubay, iyada oo loo marayo bilow maamulka menu.
para macluumaad dheeraad ah adiga kugu saabsan waxaad si toos ah u booqan kartaa qaybtiisa Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo (Su'aal) iyo goobteeda rasmiga ah ee GitHub.
Soo koobid, "Ventoy" waa weyn oo fudud ilaha furan ee dalabka iskutallaabta, oo ka mid ah kuwa badan oo jira, si abuuro darawalada USB -ga ee la adeegsan karo ee faylasha sawirada disk (ISO / WIM / IMG / VHD (x) / EFI). Markaa waxaan rajaynaynaa inaad isku dayi doonto oo aad isticmaali doonto haddii ay dhacdo inay daboosho baahiyahaaga marka aad maareynayso darawalada USB -ga ee la kicin karo oo leh Nidaamyo Hawlgal oo kala duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Ventoy: Codsi il furan oo loogu talagalay abuurista darawalada USB ee la kicin karo